टोकियो ओलम्पिकबाट जबरजस्ती फर्काउन खोजेपछि जहाज चढिनन् बेलारूसकी खेलाडी :: Setopati
एजेन्सी टोकियो, साउन १८
जापानको टोकियोमा अहिले ग्रिष्मकालीन ओलम्पिक चलिरहेको छ। विभिन्न खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूको चर्चा पनि भइरहेको छ।
ओलम्पिकमा सहभागी हुन गएकी बेलारूसकी एक जना खेलाडी भने अहिले पदकका कारण नभई राजनीतिक कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समाचार बनिरहेकी छन्।
बेलारूस पूर्वी युरोपको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। त्यहाँ २७ वर्षदेखि अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले तानाशाही शैलीमा शासन चलाइरहेका छन्। बेलारूसको ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तिनै लुकासेन्कोका जेठा छोरा भिक्टर लुकासेन्को छन्।
२४ वर्षीया क्रिस्टिना तिमानोभस्काया यसपालि पहिलो पटक ओलम्पिक खेल्न गएकी थिइन्। गत शुक्रबार उनले महिलाहरूको १०० मिटरको दौडमा प्रतिष्पर्धा गरेकी थिइन्। सोमबार उनी दुई सय मिटरमा दौडिने तालिका थियो। यही बीचमा उनले आफूलाई रिले दौडमा पनि राखिएको जानकारी पाइन्। केही खेलाडीको एन्टीडोपिङ परीक्षण नगरेको भन्दै बेलारूसको ओलम्पिक कमिटीले उनलाई रिले दौडमा राखेको बतायो। आफू उक्त रिले दौडका लागि खेल्न नआएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसको विरोध गरिन्। उक्त विरोधपछि आइतबार बिहान उनका प्रशिक्षक उनको कोठामा आए र सामान प्याक गर्न भने।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार क्रिस्टिनालाई जबरजस्ती हानिदा विमानस्थलमा पुर्‍याइयो तर उनले जहाज चढ्न अस्वीकार गरिन् र जापानी प्रहरीसँग सहयोग मागिन्।
टोकियो ओलम्पिकमा बेलारूसका प्रमुख युरी मोइसेभिचले भने क्रिस्टिनाको शारिरीक र मानसिक अवस्थाको मूल्यांकन गरेर उनलाई फिर्ता पठाउन लागिएको बताएका छन्। क्रिस्टिनाले आफ्नो शारिरीक र मानसिक दुबै स्वास्थ्य ठीक रहेको बताएकी छन्।
हानिदा विमानस्थलमा खिचिएको भिडिओमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) सँग सहयोग मागेकी छन्।
आइओसीले विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्ना स्टाफहरू क्रिस्टिनासँग सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी सुरक्षित रहेको बताएको छ।
बेलारूस फर्किएपछि आफूलाई लुकासेन्को सरकारले जेल हालिदिने भन्दै क्रिस्टिनाले विदेशी मुलुकसँग शरण मागेकी छन्।
बेलारूसका खेलाडीलाई सहयोग गर्ने एक संस्थाका अनुसार उनले सोमबार जर्मनी वा अष्ट्रियामा शरण माग्ने छन्। पोल्यान्डले पनि उनलाई शरण दिने बताएको छ।
केही समयअघि आफ्ना आलोचकलाई पक्राउ गर्न बेलारूसका शासक लुकासेन्कोले जहाज नै ‘अपहरण’ गरेर आफ्नो देश ल्याएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बेलारूसका अधिकारीमाथि प्रश्न गर्ने क्रिस्टिनालाई अब बेलारूसले के गर्छ? र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनलाई कसरी संरक्षण गर्छ? भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८, ०८:१२:००